चीन डबल पक्षीय पीसीबी कारखाना र निर्माता | काज
सामग्रीको सही मोटाई प्रयोग महत्त्वपूर्ण छ FR4 PCBS निर्माणको लागि। मोटाई मापन गरिएको छ ईन्चहरू, जस्तै हजारौं, इन्च, वा मिलीमीटर। त्यहाँ छनौट गर्दा विचार गर्न केहि चीजहरू छन् तपाईंको पीसीबीको लागि एक FR4 सामग्री। निम्न सुझावहरू तपाईंको चयन प्रक्रिया सरल बनाउनुहोस्:
१. पातलो FR4 सामग्रीहरू ठाउँको अवरोधका साथ प्यानल निर्माणको लागि छान्नुहोस्। पातलो सामग्रीले उपकरण निर्माण गर्न आवश्यक विभिन्न परिष्कृत कम्पोनेन्टहरूलाई समर्थन गर्न सक्छ, जस्तै ब्लुटुथ उपकरणहरू, युएसबी जडानकर्ताहरू, इत्यादि। तिनीहरू ठूला परियोजनाहरूका लागि पनि उपयुक्त छन् जहाँ इन्जिनियरहरूले अन्तरिक्ष बचत डिजाइनमा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छन्।
२. पातलो FR4 सामग्रीहरू लचिलोपन चाहिने अनुप्रयोगहरूको लागि उपयुक्त छन्। उदाहरण को लागी, मोटर वाहन र मेडिकल पीसीबी को लागी पातलो सामग्री को उपयोग आदर्श छ किनकि यी PCBs
नियमित झुकाउन आवश्यक छ।
ग्रुभ्ड पीसीबी डिजाइनका लागि पातलो सामग्री छनौट गर्नबाट रोक्नुहोस्, किनकि यसले क्षति वा सर्किट बोर्ड फुट्ने जोखिमलाई बढाउँछ।
The. सामग्रीको मोटाईले मुद्रित सर्किट बोर्डको वजनलाई असर गर्न सक्छ र कम्पोनेन्ट कम्प्याटिबिलिटीलाई पनि असर गर्न सक्छ। यसको अर्थ पातलो FR4 सामग्री तार्किक रूपमा लाइटवेट सर्किट बोर्डको निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउँछ, जसले फलस्वरूप लाइटवेट इलेक्ट्रोनिक्स निम्त्याउँछ। यी हल्का उत्पादहरू आकर्षक छन् र यातायात गर्न सजिलो छ।
जब FR4 सामग्री प्रयोग गर्नबाट जोगिन, FR4 सामग्री सही विकल्प छैन यदि तपाईंको अनुप्रयोगलाई निम्न मध्ये कुनै पनि आवश्यक छ: उत्कृष्ट तातो प्रतिरोध: यदि PCB उच्च तापमान वातावरणमा प्रयोग गर्ने हो भने FR4 सिफारिश गरिदैन। उदाहरण को लागी, FR4 सामग्री एयरोस्पेस अनुप्रयोगहरु मा पीसीबी को लागी सही विकल्प छैन।
लीड-फ्री वेल्डिंग: यदि तपाइँको ग्राहकलाई RoHS अनुरूप पीसीबी आवश्यक छ भने, सीसा-रहित वेल्डिंग प्रयोग गर्नुपर्नेछ। सीसा-रहित सोल्डरिंगको समयमा, भाटा तापक्रम २ 250० डिग्री सेल्सियसको शिखरमा पुग्न सक्छ, र यसको न्यून तापमान प्रतिरोधको कारण, FR4 सामग्री
यो सामना गर्न सक्दैन।
उच्च फ्रिक्वेन्सी संकेत: जब उच्च आवृत्ति संकेतमा पर्दा, FR4 प्लेट स्थिर प्रतिबाधा कायम राख्न सक्दैन। नतिजाको रूपमा, उतार-चढाव हुन्छ र संकेतको अखण्डतालाई असर गर्न सक्छ।
उनीहरूको लोकप्रियता र बृहत प्रयोगको कारणले, आज बजारमा विनिर्देशहरू र प्रकार्यहरू सहित एफआर4पीसीबी सामग्रीहरू फेला पार्न सजिलो छ। यस्ता धनी छनौटहरूले कहिलेकाँही विकल्पहरू गाह्रो बनाउँदछ। यस अवस्थामा, निर्मातासँग तपाईंको आवश्यकताहरूको बारेमा छलफल गर्न महत्त्वपूर्ण छ।